Mgbanwe ihu igwe nwere ike ịkwụsị Olympic | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbanwe ihu igwe nwere ike ịkwụsị Olympic
Ugbu a ka a na-eme egwuregwu asọmpi 2016, nke ndị niile sonyere ga-enye ike ha niile iji nweta nrite, nyocha e bipụtara na akwụkwọ sayensị sayensị The Lancet amalitela ichegbu anyị, ebe ọ na-enupụ isi na mgbanwe ihu igwe nwere ike ịkwụsị Olympic, ma ọ dịkarịa ala, ndị anyị maara taa.
Ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ ga-aga n'ihu na-ebili, yabụ dịka ụdị ndị nchọpụta ahụ siri kee, naanị obodo asatọ na-abụghị Western Europe nwere ike ịnabata mmemme a maka 2085.
Ma nke a bụ ihe nwere mgbagha. Ugboro ole ka a gwara gị ma ọ bụ nụ na ị nwere ike imega ahụ ma ọ bụrụ na ị plentyụrụ nnukwu mmiri ma ọ bụ ihe ọ energyụ energyụ ike? Ọtụtụ, nri? Na mgbakwunye, dabere na ọkụ ọ dị, ihe dị mma abụghị ịme ụdị egwuregwu ọ bụla, dịka anyị nwere ike itinye ahụike anyị n'ihe egwu.
Ọfọn, ndị na-ahụ maka ịhazi ihe omume a kwesịrị ijide n'aka na a gaghị amanye ha ịkagbu ya n'ihi oke okpomọkụ, ihe nwere ike ịme ga-eme n'oge na-adịghị anya karịa ka anyị chere.
Ọgwụgwụ nke egwuregwu Olimpik?
Ndị ode akwụkwọ nyocha ahụ ji data okpomọkụ na mmiri na-amata obodo ndị nwere ike ịnabata mmemme Olympic n'èzí n'oge ọkọchị. Iji mee nke a, ha jiri marathon dị ka ule, ebe ọ bụ na ọ bụ nke chọrọ nguzogide ka ukwuu. Ihe si na ya pụta bụ naanị otu 70% nke ndị asọmpi dechara ule ruru eru maka US Marathon Team na Los Angeles, California.
Iji kpuchido ndị sonyere, a na-achọ obodo ndị na-erughị 1,6 kilomita n'elu oke osimiri iji zere ọrịa ịdị elu, na Northern Hemisphere ebe ọ bụ ebe 90% nke ndị bi na ya, ma nwee ọnụ ọgụgụ ndị ọ dịkarịa ala mmadụ 600.000. N'agbanyeghị nke ahụ, mgbanwe ihu igwe ga-amanye anyị niile ịgbanwe usoro anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbanwe ihu igwe nwere ike ịkwụsị Olympic
Gịnị bụ ọbara nke Antarctica?
Mwakpo nke ọchịcha na New York site na ebili mmiri